Ogaden News Agency (ONA) – Calanka Ogadeniya oo ka dhex babanaya shirka Salo Finland iyo Hoggaanka Arrimaha Dibada oo kaso laabtay shirki dhalinta:
Calanka Ogadeniya oo ka dhex babanaya shirka Salo Finland iyo Hoggaanka Arrimaha Dibada oo kaso laabtay shirki dhalinta:
Shirweynihii dhalinyrada Qaarada Europe oo Maalinkii saddexaad siisocda
Dhalinta Ogadeniya ee Qaarada Europe ayaa isugu tagay magalada Salo halkaas oo xarun aad uweyn oo ay ku jiri donaan 5 maalmood kujira. Waxaa Maalinkii 3aad ee shirka laga hortaagay Calanka Shacabka Somalida Ogadeniya. Intii aan la taagin calanka ayaa waxa dhalinta OYSU iyo marti sharafta oo kamid yahay Hoggaanka Arrimaha Dibada JWXO Cabdi raxmaan mahdi, waxaa saf lagalay aad u dheer iyada oo laqaadayo Heesta Calanka Somalida Ogadeniya. Waxaana si tartiib tartiib ah loo sudhay calanka birta dheer ilaa meesha ugu sareysa uu ka ba’banayay calanku. Waxaa isku mar dhamaaday Heesta Calanka Somalida Ogadeniya iyo dhuujintii xadhkaha ku xidhnaa calanka ee lagu xidhayay birta.
Waxaana halkaas qudbad kasoo jeediyay Mudane Cabdiraxmaan Mahdi oo dhalinta OYSU iyo dhamaan kasoo qeybgalayashi shirka kula dardaarmay. Cabdi raxmaan Mahdi waxa uu dhalinta aad ugu guubaabiyay inay waxbartaan isaga oo ku tilmaamay qofka aan aqoonta laheyn qof indho la’aan oo kale ah. Hoggaanka Arrimaha Dibada ayaa kala qeyb qaatay Kulankii maanta dhalinta intiisii badneyd. waxa uuna macasalameyay dhalintii isaga oo Safarkiisii uu ku tagay shirkaas halkaas kusoo dhamaaday kana anba baxay munasbada.
Halgame Cabdi Raxmaan Mahdi ayaa laftigiisu ahaa xubin kusoo barbaaray kacdoonkii dhaliniyarada ee WSLF. Waxuuna aqoonbadan iyo wacyi badan oo khibradeed u leeyahay halgamada dhalintu kaalintay ka ciyaari karaan. Hoggaanka Arrimaha Dibada ayaa dhalinyarada u sheegay innuu wali yahay xubin kamid ah Dhalinyarada maadama illaa wagaas uu kamidka ahaa dhalintii WSLF darojyinbadana kasoo qabtay aysan jirin goob xubinimadisa looga qaaday. Waxuna dhalinta u sheegay innuu xubin buuxa ka yahay OYSU.
Moraalka Dhalinyrada OYSU oo aad u heer sareeya, shacnigooda quruxda badan iyo jaceylka badan ee ay u qabaan halganka iyo madaxdooda Ururka Jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya ayaa si fiican halkaas uga muuqatay. Waxa halkaas uu kala kulmay Halgame Cabdi Raxmaan maaday fariimo badan oo dhalintu usoo gudbisay madaxda Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya oo ay ku siinayaan kalsooni buuxda. Waxaa kale oo Gudoonku uu la kulmay dhalinyaro diyaar u ah inay hantaan dhulkooda hooyo diyaarna ah habeen iyo maalinba oo u bisil hanaanka ururnimo ee lagarabo ururada bulshada Ogadeniya.